Iyo sainzi Inobata Kubata, Isingakanganwike uye Inokurudzira Kushambadzira Mharidzo | Martech Zone
Iyo Sayenzi Inobata Kubata, Isingakanganwike uye Inokurudzira Kushambadzira Mharidzo
Muvhuro, June 20, 2016 Peter Arvai
Vatengesi vanoziva zvirinani kupfuura chero ani zvake kukosha kwekutaurirana zvinobudirira. Nechiito chekushambadzira, chinangwa ndechekuendesa meseji kune vateereri vako nenzira inovabata, inonamira mundangariro dzavo, uye inovanyengetedza kuti vatore matanho - uye zvakafanana zvinoshanda kune chero mhando yemhando. Kunyangwe uchivaka tafura yetimu yako yekutengesa, uchikumbira bhajeti kubva kuvakuru manejimendi, kana kukudziridza chiratidzo-chekuvaka chirevo chemusangano mukuru, unofanirwa kuve uchiita, usingakanganwiki, uye unonyengetedza.
Mubasa redu rezuva nezuva pa Prezi, ini nechikwata changu takaita tsvagiridzo yakawanda pamusoro penzira yekuendesa ruzivo nenzira ine simba uye inoshanda. Isu takadzidza basa rema psychologists uye neuroscientists kuyedza kunzwisisa mashandiro anoita pfungwa dzevanhu. Sezvazvinoitika, isu takaomeserwa kupindura kune mamwe marudzi ezvemukati, uye pane zvinhu zvishoma zvakapusa izvo varidzi vanogona kuita kushandisa izvi. Hezvino izvo sainzi inotaura nezvekuvandudza mharidzo dzako:
Regedza kushandisa mabara mabara - iwo haasi akakodzera munzira iyo yako tarisiro 'uropi hunoshanda.
Wese munhu anoziva nezvechivanhu slide: musoro wenyaya unoteverwa nerondedzero yemabara emapoinzi. Sayenzi yakaratidza kuti fomati iyi, zvisinei, haina basa zvakanyanya, kunyanya kana ichienzaniswa neimwe nzira yekuona. Vatsvagiri veNielsen Norman Boka vakaita zvidzidzo zvakawanda zvekutarisa nemeso kuti vanzwisise kuti vanhu vanodya sei zvirimo. Mumwe wavo zviwanikwa zvakakosha ndeyekuti vanhu vanoverenga mapeji ewebhu mu "F-yakaita patani." Ndokunge, ivo vanoteerera zvakanyanya kune izvo zviri pamusoro peji uye voverenga zvishoma uye zvishoma pamutsara wega wega unotevera sezvavanofamba pasi peji. Kana isu tikashandisa iyi mepu yekupisa kune echinyakare masiraidhi fomati - musoro wenyaya unoteverwa nebara-yakanongedzwa rondedzero yeruzivo - zviri nyore kuona kuti zvakawanda zvezviri mukati hazvizoverengeke.
Chiri chakaipisisa, apo vateereri vako vari kunetseka kuongorora masiraidhi ako, ivo havasi kuzoteerera kune zvaunofanira kutaura, nekuti vanhu havagone kuita zvinhu zviviri kamwechete. Sekureva kweMIT neuroscientist Earl Miller, imwe yenyanzvi dzepasirese nezve kutarisisa kwakatarisana, "kuita zvakawanda" hazviite chaizvo. Kana isu tichifunga kuti tiri kuita akawanda mabasa panguva imwe chete, isu tiri kunyatsochinja, nekuziva, pakati peumwe neumwe wemabasa aya nekukurumidza zvakanyanya - izvo zvinoita kuti tiwedzere pane zvese zvatiri kuedza kuita. Nekuda kweizvozvo, kana vateereri vako vari kuyedza kuverenga ivo vachiteerera iwe, ivo vangangorega uye kupotsa zvidimbu zvemashoko ako.
Saka nguva inotevera paunenge uchivaka mharidzo, teerera iwo mabara mabara. Panzvimbo iyoyo, namatira nezvinoonekwa pachinzvimbo chemavara pese pazvinokwanisika, uye ganhurira huwandu hweruzivo pane yega yega slide kune huwandu huri nyore kugadzirisa.
Shandisa madimikira kuitira kuti tarisiro yako isangogadzirise ruzivo rwako - asi uzive
Wese munhu anoda nyaya yakanaka inounza zvinotapira, zvinakirwa, hwema, nekubata kuhupenyu- uye zvinoitika kuti pane chikonzero chesainzi cheizvi. Zvakawanda zvidzidzo vawana kuti mazwi anotsanangurwa nemitsara - zvinhu zvakaita se "pefiyumu" uye "aive nezwi rine velveti" - fambisa iyo inonzwa kortex muhuropi hwedu, inova nebasa rekuona zvinhu zvakaita sekuravira, kunhuwidza, kubata uye kuona. Ndokunge, iyo nzira iyo huropi hwedu hwekuita kuverenga nekunzwa nezve zviitiko zvekunzwa zvakafanana nenzira yazvinoita nayo kuvaona. Paunotaura nyaya dzakazara nemifananidzo inotsanangurwa, uri, chaizvo, uchiunza meseji yako kuhupenyu muhuropi hwevateereri vako.
Kune rimwe divi, kana ikapihwa neruzivo rwusinga tsanangure - semuenzaniso, "Chikwata chedu chekushambadzira chakazadzisa zvibodzwa zvacho zvese zvemari muQ1," - izvo chete zvikamu zvehuropi hwedu zvinogoneswa ndizvo zvine chekuita nekunzwisisa mutauro. Panzvimbo ye experiencing izvi zvirimo, isu tiri zvakapusa kugadzira izvozvo.
Kushandisa madimikira mukati menyaya chishandiso chakasimba chekuita nekuti chinobata huropi hwese. Mifananidzo yakajeka inounza zvirimo kuhupenyu-chaizvo chaizvo-mupfungwa dzevateereri vako. Inotevera nguva iwe paunoda kubata kutarisa kwekamuri, shandisa yakajeka mifananidzo.
Unoda kuva usingakanganwiki here? Batanidza mazano ako munzvimbo, kwete chete zvakanangana.
Iwe unofunga iwe unogona here kubata nemusoro iwo marongedzero maviri akavharika emakadhi mukati memaminitsi mashanu? Izvi ndizvo chaizvo zvakafanirwa kuitwa naJoshua Foer paakakunda iyo United States Memory Championship muna 2006. Zvingaite kunge zvisingaite, asi akakwanisa kubata nemusoro huwandu hweruzivo munguva pfupi kwazvo izvi nerubatsiro rwechinyakare. hunyanzvi hwavepo kubvira 80 BC-maitiro aunogona kushandisa kuita kuti mharidzo dzako dziwedzere kuyeukwa.
Iyi nzira inonzi "nzira ye loci," inonyanya kuzivikanwa seyemuzinda wamambo, uye inovimba nekwaniso yedu yekugona kurangarira hukama hwepakati-iko nzvimbo yezvinhu zvinehukama. Vavhimi vedu-vanounganidza madzitateguru akashandura ichi chine simba nzvimbo yekurangarira pamusoro pemamirioni emakore kutibatsira kufamba nenyika uye kutsvaga nzira yedu.
Ongororo dzakawanda dzakaratidza kuti nzira ye loci inovandudza ndangariro - semuenzaniso, mu imwe kudzidza, vanhu vakajairika vaigona kubata nemusoro mashoma mashoma manhamba (manomwe ari pakati nepakati) vakakwanisa kurangarira kusvika pamakumi manonwe makumi masere mushure mekushandisa nzira. Ndiko kuvandudzwa kweanosvika 90%.
Saka, nzira yei loci inotidzidzisei nezvekugadzira mharidzo dzisingakanganwike? Kana iwe uchikwanisa kutungamira vateereri vako parwendo rwekuona runoratidza hukama pakati pemazano ako, vanozonyanya kurangarira meseji yako - nekuti ivo vari nani pakurangarira rwendo irworwo rwekuona pane zvavari pakurangarira zvinyorwa zvemabara.
Inomanikidza dhata haina kumira yega - inouya nenyaya.
Nhau ndeimwe yenzira dzakakosha kwazvo dzatinodzidzisa vana nezvepasi uye maitiro ekuzvibata. Uye zvinoitika kuti nyaya dzakangofanana nesimba kana zvasvika pakuendesa meseji kuvakuru. Tsvagiridzo yakaratidza zvakare uye zvakare kuti kutaura ngano ndeimwe yenzira dzakanakisa dzekunyengetedza vanhu kuti vatore matanho.
Tora, semuenzaniso, chidzidzo inoitwa napurofesa wekushambadzira paWharton Bhizinesi Chikoro, iyo yakaedza mabhurocha maviri akasiyana akagadzirirwa kufambisa zvipo kuSave the Children Fund. Bhurocha rekutanga rakataura nyaya yaRokia, musikana ane makore manomwe kubva kuMali uyo "hupenyu hwaizoshandurwa" nechipo kune NGO. Bhurocha rechipiri rakanyora chokwadi nezviverengero zvine chekuita nenhamo yevana vari kuziya nenzara muAfrica yese - senge chokwadi kuti "vanhu vanopfuura mamirioni gumi neumwe muEthiopia vanoda rubatsiro rwechikafu nekukurumidza."
Chikwata kubva kuWharton chakawana kuti bhurocha raive nenyaya yeRokia rakafambisa zvakanyanya mipiro kupfuura iyo yakazara-nhamba. Izvi zvingaratidzika sezvisingabvumirane-munyika yanhasi inotungamirwa nedata, kuita sarudzo kunoenderana ne "gut kunzwa" pane chokwadi uye nhamba zvinowanzo kuvezwa-pamusoro. Asi ichi chidzidzo cheWharton chinoburitsa kuti muzviitiko zvakawanda, manzwiro anotyaira zvisarudzo zvakanyanya kupfuura kufunga kwekuongorora. Inotevera nguva iwe yaunoda kugutsa vateereri vako kuti vatore matanho, funga kutaurira nyaya inounza meseji yako kuhupenyu pane kuendesa data wega.
Kukurukurirana kuridza zviridzwa kana zvasvika pakunyengetedza.
Vashandi vezvekutengesa vanoziva kuti kuvaka zvemukati zvinobata vateereri vako, uye kuchivakurudzira kuti vapfuurirane nazvo, zvinoshanda kupfuura chimwe chinhu chisingadyiswe, asi zvakafanana zvinogona kushandiswa kune mumwe wevatengesi: kutengesa. Tsvagurudzo zhinji dzakaitwa padhuze nekunyengerera mumamiriro ekuratidzwa kwekutengesa. RAIN Boka rakaongorora hunhu yevashandi vekutengesa vakakunda mikana mazana manomwe eB700B, kusiyana nehunhu hwevaya vatengesi vakauya panzvimbo yechipiri. Tsvagurudzo iyi yakaratidza kuti chimwe chezvinhu zvakakosha zvekutunda kwekuhwina kwenzvimbo - ndiko kuti, nzvimbo inonyengetedza - iri kubatana nevateereri vako.
Mukutarisa maitiro gumi ekumusoro akaparadzanisa vatengesi vanonyengedza kubva kune avo vasina kuhwina chibvumirano ichi, RAIN Boka vaongorori vakawana kuti tarisiro dzakanyorwa kubatana, kuteerera, kunzwisisa zvinodiwa, nekubatana pachezvako sevamwe vevanonyanya kukosha. Muchokwadi, kubatana pamwe netarisiro kwakanyorwa senge iyo nhamba mbiri maitiro akakosha kana zvasvika pakukunda nzvimbo yekutengesa, uchangodzidzisa tarisiro nemazano matsva.
Kugadzira nhandare senge hurukuro - uye kugadzira hwaro hunobvumira vateereri kutora chigaro chemutyairi pakusarudza zvekukurukura - chishandiso chakakosha mukutengesa zvinobudirira. Zvizere zvakanyanya, mune chero mharidzo apo urikuyedza kugonesa vateereri vako kuti vatore matanho, funga kutora nzira yekubatana kana uchida kubudirira.
Dhawunirodha Sayenzi Yezvinobudirira Mharidzo
Tags: bullet pointspfungwamharidzo dzekushambadziramifananidzonzira ye lociprezinzvimbothematic nzvimbo
Peter ndiye CEO we Prezi, software yekudyidzana, iyo yaakatangisa muna2008 naAdam Somlai-Fischer naPéter Halácsy, mugadziri uye mugadziri, senzira yekugadzira nzira isingakanganwike uye inobata vanhu yekugovana nyaya. Asati abatana Prezi, Peter akatanga omvard.se, kambani inounganidza data pamusoro pemhedzisiro yekurapa kwevarwere vemuzvipatara, pamwe nekuvandudza yekutanga nyika kuverenga muverengi kuitira kuti vanhu vatevere TED Talks kubva kunharembozha yavo.